လူတစ်ယောက်အတွက် မရှိမဖြစ်တဲ့ သူငယ်ချင်း(၈)မျိုး ဆိုတာ ... - Achawlaymyar
သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စကား တစ်ခွန်းက ဒီလိုဆို ထားပါတယ်။ “သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေများရင် လျှောက်တဲ့လမ်းက ဖြောင့်သွားတယ်”တဲ့။ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတွေ အသစ်တိုးတာ မင်္ဂလာ တစ်ပါးပါ။ လူတိုင်း သူငယ်ချင်းအသစ်တွေနဲ့ ခင်မင်ရင်းနှီးနိုင်ဖို့ မျှော်လင့် ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ (American Sociological Review，ASR)က
သူတို့လေ့လာ ဆန်းစစ်ခဲ့တဲ့ ဆန်းစစ်ချက် အရ အခုခေတ်လူတွေမှာ သူငယ်ချင်းတွေ နည်းသ ထက်နည်းခဲ့ ကြတာကို တွေ့ ရတယ်။ လေ့လာဆန်းစစ်ခံရသူ ၄ပုံ၁ပုံက သူတို့မှာ သူငယ်ချင်းနည်းရတဲ့အကြောင်းက ဘယ်သူ့ကိုမှ ယုံကြည်လို့မရကြောင်း ဆိုထားကြတယ်။
လျင်သူစားစတမ်း၊ သာသူမြတ် ဆိုတဲ့ ခေတ်ကာလကြောင့် လူအချင်းချင်းကြားမှာ ဘယ်သူက အစစ်အမှန်၊ ဘယ်သူက အတုအယောင် ဆိုတာကို ခွဲခြားဖို့ ခက်ခဲ သွားတယ်။ “သူငယ်ချင်း”ဆိုတဲ့ အခေါ်ကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ ထိတ်လန့် လာခဲ့ ကြတယ်။
ဒီလိုဆိုရင် ဘယ်လို အရာမျိုးကို သူငယ်ချင်း အစစ်အမှန်လို့ ခေါ်သလဲ? လူတစ်သက်မှာ အဲဒီလို သူငယ်ချင်းမျိုး ဘယ်နှယောက်လို သလဲ? အမေရိကန် စာရေးဆရာ Todd Parrက “အရင်းနှီးဆုံး သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် ဆီကနေ
သင်လိုချင်တဲ့ အရာတွေ ရလိမ့်မယ်လို့ မမျှော်လင့် ပါနဲ့”လို့ ဆိုထားတယ်။ အမေရိကန်စာရေးဆရာ Tom Rathက လူတစ်ယောက်မှာ မရှိမဖြစ်တဲ့ သူငယ်ချင်း(၈)မျိုး လိုအပ်တယ်ဆိုပြီး အခုလို့ရေးသား ခဲ့ပါ တယ်။
သူတို့က သင့်ကောင်းကွက်တွေ သင်ကိုယ်တိုင် သိမြင်နိုင်ဖို့ သင့်ကို အမြဲ ကူညီအားပေးတယ်။ ဒီလို သူငယ်ချင်း မျိုးကို ဆရာအမျိုးအစား လို့ခေါ်တယ်။ သူတို့က သင့်ရဲ့ဆရာဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်မယ်။
ဒါပေမဲ့ သူတို့မှာ အခြားဗဟုသုတ၊ အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ ပြည့်စုံတယ်။ သင့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်၊ မိသားစု၊ လူလူချင်း ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံရေးတွေမှာ သူတို့က သင့်ကို အကြံဉာဏ်တွေပေး နိုင်တယ်။လူ့ဘဝမှာ ဒီလို သူငယ်ချင်းမျိုးက သင့်စိတ်ကို ထောက်ကူပေး တဲ့သူဖြစ်တယ်။ သူတို့ဟာ သင့်အနားမှာ အမြဲရှိနေပြီး သင်အတု ယူထိုက် သူလည်းဖြစ်တယ်။
သင့်ကို ဆုံး မလမ်းညွှန်ပြီး လူတွေရှေ့မှာ သင့်ကို ချီးမွမ်း စကားပြောတဲ့ သူငယ်ချင်း… ဒီလိုသူငယ်ချင်းမျိုးက “နင့် ငါ့ကိုကူ၊ ငါ နင့်ကိုကူ”ဆိုတဲ့ အချင်းချင်း ကူညီအားပေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။ ဘဝရှင်သန်ကြီးပြင်းရာ လမ်းတစ်လျှောက်မှာ သူငယ်ချင်းရဲ့ ဖေးမကူညီမှု၊ ချီးကျူးမှုတွေက အဖိုးတန် လွန်းတယ်။
ဆင်းရဲဒုက္ခ၊ အခက်အခဲတွေနဲ့ သင်ရင်ဆိုင်ရချိန် ဒီလိုသူငယ်ချင်းမျိုးက သင့်အ ခက်အခဲတွေကို ကူညီ မျှဝေဖြေရှင်းပေးတယ်။ သင့်ရင်ထဲက ဖိအားကို လျော့ချေ ပးတယ်။ သူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုက သင့်အတွက် စိတ်ဓာတ်အားဆေးဖြစ်တယ်။
သင်နဲ့ ဝါသနာတူသူက သင်နဲ့ပေါင်းဖက်ဖို့ အသင့်တော်ဆုံး သူငယ်ချင်းဖြစ် တယ်။ ဒီလိုသူငယ်ချင်းမျိုးနဲ့ အတူနေချိန် သင့်စိတ်က သူတို့စိတ်နဲ့ အာရုံ ခံစားမှု ချင်းတူတယ်။ ဒါကို “နားလည်မှု”လို့ခေါ်တယ်။
သင့်ပြောတဲ့စကား၊ သင့်တွေးတဲ့ အတွေးတွေက သူတို့ အတွေးတွေနဲ့ ထပ်တူနီးနီးကျတယ်။ စိတ်ချင်းကူညီအားပေးတဲ့ ခံစားမှုမျိုး ကိုရတယ်။ ဒီလိုသူငယ်ချင်းမျိုးက သင့်ကိုယ်သင် အသိအမှတ် ပြုလာအောင်
ကူညီပေးသလို သင့်ဝါသနာ၊ သင့်ရည်မှန်းချက်၊ သင့်အကြိုက်တွေကို သူတို့နဲ့အတူ မျှဝေခံစားနိုင်တယ်။ ဒီလို မျှဝေ ခံစားမှုမျိုးက သင့်စိတ်ကို လုံခြုံစေ တယ်။ မိမိကိုယ့်ကို ယုံကြည်မှုရှိစေတယ်။ စိတ်ကူးကို အလွယ်တကူ အကောင်အထည်ပေါ်စေ တယ်။ သင့်ဘဝကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ ရှင်သန် ကြီးပြင်းစေ ပါတယ်။
ဒီလိုလူမျိုးက ကူညီတဲ့ သူငယ်ချင်း အမျိုးအစားဖြစ်တယ်။ သင် အားရကျေနပ် ပျော်ရွှင်ချိန်မှာ သူတို့ရဲ့အရိပ်တွေက သင့်အနားမှာရှိမနေဘူး။ သင့် စိတ်ညစ်အားငယ် ကြေကွဲချိန်ကျမှ သင့်ရှေ့မှောက် ရောက်လာ တတ်သူတွေ ဖြစ်တယ်။
သင်ယုံကြည်စိတ်ချ ရတဲ့ ကူညီမှုမျိုးကို သူတို့ပေးတယ်။ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ အခွင့်အရေးကို သင်ပြန်မြင်ရဖို့ သူတို့စွမ်းဆောင်ပေး တယ်။ စိတ်ဓာတ်တွေ အရောင်တောက်အောင် သူတို့မပြတ် ကူညီပေးတတ် တယ်။
ဒီလိုလူမျိုးက သင့်ကိုပေါ့ပါး လန်းဆန်းစေတဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်တယ်။ တချို့သူငယ်ချင်းတွေက သင့်ကို ခင်မင်ရင်းနှီးပြီးတာနဲ့ သင့်ကို တခြား စိတ်တူကိုယ်တူ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးတယ်။
သင့်စိတ်တွေ မွန်းကြပ်တဲ့အခါ၊ စိတ်ညစ်တဲ့အခါ သူတို့က သင့်ရင်ဖွင့်သံကို ပထမဦးဆုံး နားထောင်ပေး သူတွေဖြစ်တယ်။ ဒီလို သူငယ်ချင်းမျိုးက သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးနားထောင် သူဖြစ်တယ်။
သင့်စိတ်ကို ဖြေလျော့စေ တယ်။ သူတို့နဲ့ပေါင်းသင်းရတာ သင့်ကို ဘာစိတ်ဖိအားမှ မရှိစေတဲ့အပြင် သင့်ရင်ထဲက မွန်းကြပ်နေတဲ့ အရာတွေကို ထွက်ပေါက်ပေးစေ တယ်။ သင့်ရဲ့ တည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့ စိတ်ကို အသစ်တစ်ဖန် မွေးဖွားစေ ပါတယ်။
သင့်ကို ဆန်းသစ်တဲ့အမြင်၊ ဆန်းသစ်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကို တွေ့မြင်စေတဲ့သူငယ်ချင်းဖြစ်တယ်။ ဒီလိုသူငယ်ချင်းမျိုးလည်း ဘဝမှာ မရှိလို့မဖြစ်ပါဘူး။ သူတို့ဟာ သင့်ရဲ့ “ကမ္ဘာ့စာကြည့်တိုက်”ဖြစ်တယ်။
ဒီလို သူငယ်ချင်းမျိုးက သင့်အသိဉာဏ်၊ ဗဟုသုတ၊ ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံရေးကို ကျယ်ပြန့်စေတယ်။ သင့်ကို မတူတဲ့ စိတ်ခံစားမှုမျိုးကို ခံစားစေ တယ်။ သင့်ကို မြင့်မြင့်ရပ်၊ ဝေးဝေးလှမ်းကြည့်တတ်ဖို့ သင်ပေး သူတွေဖြစ် တယ်။
သင့်စိတ်ကူး အတွေးတွေကို သန့်ရှင်း ကူညီပေးသူ၊ လမ်းပြအကြံပြုတဲ့ သူငယ်ချင်းမျိုးဖြစ်တယ်။ ဒီလို သူငယ်ချင်းမျိုးက လမ်းပြမီး အမျိုးအစားဖြစ်တယ်။ လူတိုင်းမှာ လိုအပ်ချက်နဲ့ အကူအညီ ဆိုတာ လိုအပ်တယ်။
တချို့အခက် အခဲတွေကို သင့်ကိုယ်ပိုင် စွမ်းအားနဲ့ ဖြေရှင်းဖို့ မလွယ်ကူတဲ့ အခါ ဒီလိုသူငယ်ချင်းမျိုးက သင့်ကို စိတ်ပါလက်ပါ ကူညီပြီး အသင့်တော်ဆုံး အကြံတွေကိုပေးတယ်။ သင့်စိတ်ရှုပ်ထွေးတဲ့အခါ၊ စိတ်ညစ်တဲ့ အခါပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့ကို သင်ရင်ဖွင့် နိုင်တယ်။ သူတို့က ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ သင့်စိတ်ကို ကူညီ သန့်ရှင်းပေးပြီး ကြည်လင်တဲ့ ဖက်ကို လမ်းညွှန်ပေး တယ်။
ကောင်းတဲ့ သတင်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဆိုးတဲ့ သတင်းပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့ကိုအရင် သင်ပြောပြတယ်။ သူတို့ဟာ သင်နဲ့ အမြဲအတူ ရှိနေတယ်။ ဒီလိုသူငယ်ချင်းမျိုးက ပင်လယ်ထက်ကျယ်တဲ့ ရင်ခွင်ရှိတယ်။ တောင်တန်းတွေလို မြင့်မားတဲ့ စိတ်သဘောထားရှိတယ်။ သူတို့ကို သင်ဘယ်အချိန်သွားရှာခဲ့ရှာခဲ့ သူတို့က သင့်ကိုနွေးနွေးထွေးထွေး ကြိုဆိုတယ်။
သူတို့က သင့်အတွက် စိတ်ပြည့်ဝ၊ တည်ငြိမ်စေတဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်တယ်။ တစ်ခါတလေ ပြောစရာ စကားများများစားစား မရှိချင်နေ သင့်အနားမှာ သူတို့ရှိတယ်ဆိုရင်ပဲ သင့်စိတ်ကို တည်ငြိမ်အေးချမ်းစေပါတယ်။
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အမြဲမဆက်သွယ်တိုင်း၊ အမြဲမတွေ့ဆုံမိတိုင်း မေ့သွားပြီလို့ မဆိုနိုင်ပါဘူး။ သူငယ်ချင်းဆိုတာ ဟောင်းနွမ်းသွားလို့ ရပေမယ့် ခင်မင်ရင်းနှီးမှုက ယုတ်လျော့သွားလို့ မရဘူး။
သင့်ဘဝတစ်သက်မှာ စိတ်တူကိုယ်တူ သူငယ်ချင်းကောင်း ဘယ်နှယောက်ရှိနိုင်မလဲ? တကယ်လို့ အထက်က သူငယ်ချင်းမျိုးနဲ့ သင်ကြုံဆုံလာတဲ့အခါ သူတို့ကို တန်ဖိုးထားမြတ်နိုးလိုက်ပါ။
သူငယျခငျြး မိတျဆှတှေနေဲ့ ပတျသကျတဲ့ စကား တဈခှနျးက ဒီလိုဆို ထားပါတယျ။ “သူငယျခငျြး မိတျဆှမြေားရငျ လြှောကျတဲ့လမျးက ဖွောငျ့သှားတယျ”တဲ့။ သူငယျခငျြး မိတျဆှတှေေ အသဈတိုးတာ မင်ျဂလာ တဈပါးပါ။ လူတိုငျး သူငယျခငျြးအသဈတှနေဲ့ ခငျမငျရငျးနှီးနိုငျဖို့ မြှျောလငျ့ ကွတယျ။ ဒါပမေဲ့ (American Sociological Review，ASR)က
သူတို့လလေ့ာ ဆနျးစဈခဲ့တဲ့ ဆနျးစဈခကျြ အရ အခုခတျေလူတှမှော သူငယျခငျြးတှေ နညျးသ ထကျနညျးခဲ့ ကွတာကို တှေ့ ရတယျ။ လလေ့ာဆနျးစဈခံရသူ ၄ပုံ၁ပုံက သူတို့မှာ သူငယျခငျြးနညျးရတဲ့အကွောငျးက ဘယျသူ့ကိုမှ ယုံကွညျလို့မရကွောငျး ဆိုထားကွတယျ။
လငျြသူစားစတမျး၊ သာသူမွတျ ဆိုတဲ့ ခတျေကာလကွောငျ့ လူအခငျြးခငျြးကွားမှာ ဘယျသူက အစဈအမှနျ၊ ဘယျသူက အတုအယောငျ ဆိုတာကို ခှဲခွားဖို့ ခကျခဲ သှားတယျ။ “သူငယျခငျြး”ဆိုတဲ့ အချေါကိုလညျး ကြှနျတျောတို့ ထိတျလနျ့ လာခဲ့ ကွတယျ။
ဒီလိုဆိုရငျ ဘယျလို အရာမြိုးကို သူငယျခငျြး အစဈအမှနျလို့ ချေါသလဲ? လူတဈသကျမှာ အဲဒီလို သူငယျခငျြးမြိုး ဘယျနှယောကျလို သလဲ? အမရေိကနျ စာရေးဆရာ Todd Parrက “အရငျးနှီးဆုံး သူငယျခငျြး တဈယောကျ ဆီကနေ
သငျလိုခငျြတဲ့ အရာတှေ ရလိမျ့မယျလို့ မမြှျောလငျ့ ပါနဲ့”လို့ ဆိုထားတယျ။ အမရေိကနျစာရေးဆရာ Tom Rathက လူတဈယောကျမှာ မရှိမဖွဈတဲ့ သူငယျခငျြး(၈)မြိုး လိုအပျတယျဆိုပွီး အခုလို့ရေးသား ခဲ့ပါ တယျ။
သူတို့က သငျ့ကောငျးကှကျတှေ သငျကိုယျတိုငျ သိမွငျနိုငျဖို့ သငျ့ကို အမွဲ ကူညီအားပေးတယျ။ ဒီလို သူငယျခငျြး မြိုးကို ဆရာအမြိုးအစား လို့ချေါတယျ။ သူတို့က သငျ့ရဲ့ဆရာဖွဈခငျြမှ ဖွဈမယျ။
ဒါပမေဲ့ သူတို့မှာ အခွားဗဟုသုတ၊ အတှအေ့ကွုံတှနေဲ့ ပွညျ့စုံတယျ။ သငျ့ရဲ့အလုပျအကိုငျ၊ မိသားစု၊ လူလူခငျြး ပေါငျးသငျး ဆကျဆံရေးတှမှော သူတို့က သငျ့ကို အကွံဉာဏျတှပေေး နိုငျတယျ။လူ့ဘဝမှာ ဒီလို သူငယျခငျြးမြိုးက သငျ့စိတျကို ထောကျကူပေး တဲ့သူဖွဈတယျ။ သူတို့ဟာ သငျ့အနားမှာ အမွဲရှိနပွေီး သငျအတု ယူထိုကျ သူလညျးဖွဈတယျ။
သငျ့ကို ဆုံး မလမျးညှနျပွီး လူတှရှေမှေ့ာ သငျ့ကို ခြီးမှမျး စကားပွောတဲ့ သူငယျခငျြး… ဒီလိုသူငယျခငျြးမြိုးက “နငျ့ ငါ့ကိုကူ၊ ငါ နငျ့ကိုကူ”ဆိုတဲ့ အခငျြးခငျြး ကူညီအားပေးတဲ့သူဖွဈတယျ။ ဘဝရှငျသနျကွီးပွငျးရာ လမျးတဈလြှောကျမှာ သူငယျခငျြးရဲ့ ဖေးမကူညီမှု၊ ခြီးကြူးမှုတှကေ အဖိုးတနျ လှနျးတယျ။
ဆငျးရဲဒုက်ခ၊ အခကျအခဲတှနေဲ့ သငျရငျဆိုငျရခြိနျ ဒီလိုသူငယျခငျြးမြိုးက သငျ့အ ခကျအခဲတှကေို ကူညီ မြှဝဖွေရှေငျးပေးတယျ။ သငျ့ရငျထဲက ဖိအားကို လြော့ခြေ ပးတယျ။ သူတို့ရဲ့ယုံကွညျမှုက သငျ့အတှကျ စိတျဓာတျအားဆေးဖွဈတယျ။
သငျနဲ့ ဝါသနာတူသူက သငျနဲ့ပေါငျးဖကျဖို့ အသငျ့တျောဆုံး သူငယျခငျြးဖွဈ တယျ။ ဒီလိုသူငယျခငျြးမြိုးနဲ့ အတူနခြေိနျ သငျ့စိတျက သူတို့စိတျနဲ့ အာရုံ ခံစားမှု ခငျြးတူတယျ။ ဒါကို “နားလညျမှု”လို့ချေါတယျ။
သငျ့ပွောတဲ့စကား၊ သငျ့တှေးတဲ့ အတှေးတှကေ သူတို့ အတှေးတှနေဲ့ ထပျတူနီးနီးကတြယျ။ စိတျခငျြးကူညီအားပေးတဲ့ ခံစားမှုမြိုး ကိုရတယျ။ ဒီလိုသူငယျခငျြးမြိုးက သငျ့ကိုယျသငျ အသိအမှတျ ပွုလာအောငျ
ကူညီပေးသလို သငျ့ဝါသနာ၊ သငျ့ရညျမှနျးခကျြ၊ သငျ့အကွိုကျတှကေို သူတို့နဲ့အတူ မြှဝခေံစားနိုငျတယျ။ ဒီလို မြှဝေ ခံစားမှုမြိုးက သငျ့စိတျကို လုံခွုံစေ တယျ။ မိမိကိုယျ့ကို ယုံကွညျမှုရှိစတေယျ။ စိတျကူးကို အလှယျတကူ အကောငျအထညျပျေါစေ တယျ။ သငျ့ဘဝကို ပြျောပြျောရှငျရှငျနဲ့ ရှငျသနျ ကွီးပွငျးစေ ပါတယျ။
ဒီလိုလူမြိုးက ကူညီတဲ့ သူငယျခငျြး အမြိုးအစားဖွဈတယျ။ သငျ အားရကနြေပျ ပြျောရှငျခြိနျမှာ သူတို့ရဲ့အရိပျတှကေ သငျ့အနားမှာရှိမနဘေူး။ သငျ့ စိတျညဈအားငယျ ကွကှေဲခြိနျကမြှ သငျ့ရှမှေ့ောကျ ရောကျလာ တတျသူတှေ ဖွဈတယျ။
သငျယုံကွညျစိတျခြ ရတဲ့ ကူညီမှုမြိုးကို သူတို့ပေးတယျ။ မြှျောလငျ့ခကျြနဲ့ အခှငျ့အရေးကို သငျပွနျမွငျရဖို့ သူတို့စှမျးဆောငျပေး တယျ။ စိတျဓာတျတှေ အရောငျတောကျအောငျ သူတို့မပွတျ ကူညီပေးတတျ တယျ။
ဒီလိုလူမြိုးက သငျ့ကိုပေါ့ပါး လနျးဆနျးစတေဲ့ သူငယျခငျြးဖွဈတယျ။ တခြို့သူငယျခငျြးတှကေ သငျ့ကို ခငျမငျရငျးနှီးပွီးတာနဲ့ သငျ့ကို တခွား စိတျတူကိုယျတူ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ မိတျဆကျပေးတယျ။
သငျ့စိတျတှေ မှနျးကွပျတဲ့အခါ၊ စိတျညဈတဲ့အခါ သူတို့က သငျ့ရငျဖှငျ့သံကို ပထမဦးဆုံး နားထောငျပေး သူတှဖွေဈတယျ။ ဒီလို သူငယျခငျြးမြိုးက သငျ့အတှကျ အကောငျးဆုံးနားထောငျ သူဖွဈတယျ။
သငျ့စိတျကို ဖွလြေော့စေ တယျ။ သူတို့နဲ့ပေါငျးသငျးရတာ သငျ့ကို ဘာစိတျဖိအားမှ မရှိစတေဲ့အပွငျ သငျ့ရငျထဲက မှနျးကွပျနတေဲ့ အရာတှကေို ထှကျပေါကျပေးစေ တယျ။ သငျ့ရဲ့ တညျငွိမျအေးခမျြးတဲ့ စိတျကို အသဈတဈဖနျ မှေးဖှားစေ ပါတယျ။
သငျ့ကို ဆနျးသဈတဲ့အမွငျ၊ ဆနျးသဈတဲ့အခှငျ့အရေးတှကေို တှမွေ့ငျစတေဲ့သူငယျခငျြးဖွဈတယျ။ ဒီလိုသူငယျခငျြးမြိုးလညျး ဘဝမှာ မရှိလို့မဖွဈပါဘူး။ သူတို့ဟာ သငျ့ရဲ့ “ကမ်ဘာ့စာကွညျ့တိုကျ”ဖွဈတယျ။
ဒီလို သူငယျခငျြးမြိုးက သငျ့အသိဉာဏျ၊ ဗဟုသုတ၊ ပေါငျးသငျး ဆကျဆံရေးကို ကယျြပွနျ့စတေယျ။ သငျ့ကို မတူတဲ့ စိတျခံစားမှုမြိုးကို ခံစားစေ တယျ။ သငျ့ကို မွငျ့မွငျ့ရပျ၊ ဝေးဝေးလှမျးကွညျ့တတျဖို့ သငျပေး သူတှဖွေဈ တယျ။
သငျ့စိတျကူး အတှေးတှကေို သနျ့ရှငျး ကူညီပေးသူ၊ လမျးပွအကွံပွုတဲ့ သူငယျခငျြးမြိုးဖွဈတယျ။ ဒီလို သူငယျခငျြးမြိုးက လမျးပွမီး အမြိုးအစားဖွဈတယျ။ လူတိုငျးမှာ လိုအပျခကျြနဲ့ အကူအညီ ဆိုတာ လိုအပျတယျ။
တခြို့အခကျ အခဲတှကေို သငျ့ကိုယျပိုငျ စှမျးအားနဲ့ ဖွရှေငျးဖို့ မလှယျကူတဲ့ အခါ ဒီလိုသူငယျခငျြးမြိုးက သငျ့ကို စိတျပါလကျပါ ကူညီပွီး အသငျ့တျောဆုံး အကွံတှကေိုပေးတယျ။ သငျ့စိတျရှုပျထှေးတဲ့အခါ၊ စိတျညဈတဲ့ အခါပဲဖွဈဖွဈ သူတို့ကို သငျရငျဖှငျ့ နိုငျတယျ။ သူတို့က ရှုပျထှေးနတေဲ့ သငျ့စိတျကို ကူညီ သနျ့ရှငျးပေးပွီး ကွညျလငျတဲ့ ဖကျကို လမျးညှနျပေး တယျ။
ကောငျးတဲ့ သတငျးပဲဖွဈဖွဈ၊ ဆိုးတဲ့ သတငျးပဲဖွဈဖွဈ သူတို့ကိုအရငျ သငျပွောပွတယျ။ သူတို့ဟာ သငျနဲ့ အမွဲအတူ ရှိနတေယျ။ ဒီလိုသူငယျခငျြးမြိုးက ပငျလယျထကျကယျြတဲ့ ရငျခှငျရှိတယျ။ တောငျတနျးတှလေို မွငျ့မားတဲ့ စိတျသဘောထားရှိတယျ။ သူတို့ကို သငျဘယျအခြိနျသှားရှာခဲ့ရှာခဲ့ သူတို့က သငျ့ကိုနှေးနှေးထှေးထှေး ကွိုဆိုတယျ။
သူတို့က သငျ့အတှကျ စိတျပွညျ့ဝ၊ တညျငွိမျစတေဲ့ သူငယျခငျြးဖွဈတယျ။ တဈခါတလေ ပွောစရာ စကားမြားမြားစားစား မရှိခငျြနေ သငျ့အနားမှာ သူတို့ရှိတယျဆိုရငျပဲ သငျ့စိတျကို တညျငွိမျအေးခမျြးစပေါတယျ။
သူငယျခငျြးတှနေဲ့ အမွဲမဆကျသှယျတိုငျး၊ အမွဲမတှဆေုံ့မိတိုငျး မသှေ့ားပွီလို့ မဆိုနိုငျပါဘူး။ သူငယျခငျြးဆိုတာ ဟောငျးနှမျးသှားလို့ ရပမေယျ့ ခငျမငျရငျးနှီးမှုက ယုတျလြော့သှားလို့ မရဘူး။
သငျ့ဘဝတဈသကျမှာ စိတျတူကိုယျတူ သူငယျခငျြးကောငျး ဘယျနှယောကျရှိနိုငျမလဲ? တကယျလို့ အထကျက သူငယျခငျြးမြိုးနဲ့ သငျကွုံဆုံလာတဲ့အခါ သူတို့ကို တနျဖိုးထားမွတျနိုးလိုကျပါ။